Bit By Bit - Kugadzira kubatana kukuru - 5.2.3 Mhedziso
Mapurogiramu ehuwandu hwevanhu anobatanidza basa revanhu vakawanda vasiri nyanzvi yekugadzirisa nyore nyore-dambudziko guru-guru risingazombogadziriswi nemakombiyuta. Vanoshandisa kupatsanidza-kuisa-kusanganisira nzira yekugadzirisa dambudziko guru muzvizhinji zvema microtasks zviri nyore zvinogona kugadziriswa nevanhu vasina unyanzvi hwakanaka. Makombiyuta akashandiswa pakugadzirisa kombiyuta anotorawo mashandisirwo emagetsi kuti awedzere kuedza kwevanhu.
Mukutsvakurudza kwemagariro evanhu, mapurogiramu ekuverengera kwevanhu anowanzoshandiswa mumamiriro ezvinhu apo vatsvakurudzi vanoda kuisa mazano, kodeji, kana kutora mifananidzo, vhidhiyo, kana magwaro. Izvi zvikamu zvinowanzosiri chigadzirwa chekupedzisira chekutsvakurudza; panzvimbo yazvo ivo ndezvakawanda zvekuongorora. Semuenzaniso, boka revanhu-coding rezvematongerwe enyika rezvematongerwo enyika rinogona kushandiswa sechikamu chekuongorora pamusoro pemasimba ekupikisana kwezvematongerwe enyika. Aya maitiro e-microtasks angangoshanda zvakanaka kana asingatsvaki kudzidziswa kwakananga uye kana pane chibvumirano chakazara pamusoro pemhinduro yakarurama. Kana basa rakataridzika rakanyanya kutendeseka-rakadai sekuti, "Iyi nyaya nhau inofanirwa here?" - zvino inowedzera kukosha kunzwisisa kuti ndiani ari kutora chikamu uye izvo zvingaita kuti vasaite. Pakuguma, unhu hwehuwandu hwemapurogiramu ehuwandu hwevanhu hunoenderana nehuwandu hwenheyo dzinobatanidzwa nevanhu: marara mukati, marara kunze.
Kuti uwedzere kuvaka intuition yako, tafura 5.1 inopa mimwe mienzaniso yekuti kuverenga kwevanhu kwakashandiswa sei mukutsvakurudza kwevanhu. Iyi tafura inoratidza kuti, kusiyana neGalaxy Zoo, mamwe mapurogiramu akawanda ekuverenga vanhu anoshandisa michina yebasa rekushanda (semuenzaniso, Amazon Mechanical Turk) uye kuvimba nevashandi vanorayirwa pane vanozvipira. Ini ndichadzoka kune iri nyaya yevatori vechikamu chinokurudzira apo ini ndinopa mazano pamusoro pokusika yako pachako kubatanidzwa pamwe chete.
Dhiyabhorosi 5.1: Mienzaniso yeParamende yeMagariro evanhu Mukutsvaga Kwemagariro evanhu
Bhuku rezvematongerwe enyika rezvematongerwo enyika Text Microtask mushizha wemabasa Benoit et al. (2016)
Bvisai chiitiko chezviitiko kubva munyaya dzemashoko pamusoro peHyupy Protests mumaguta mazana maviri eUnited States Text Microtask mushizha wemabasa Adams (2016)
Sarudza mapepanhau nyaya Text Microtask mushizha wemabasa Budak, Goel, and Rao (2016)
Bvisa ruzivo rwechiitiko kubva kumasare evarwi muHondo Yenyika 1 Text Volunteers Grayson (2016)
Tsvaga kuchinja mumamapa Mifananidzo Microtask mushizha wemabasa Soeller et al. (2016)
Chengetedza zvigadzirwa zvegoridhi Text Microtask mushizha wemabasa Porter, Verdery, and Gaddis (2016)